‘बेकनले उत्कृष्ट शैक्षिक परामर्शदाताको परिचय बनाएको छ’ – Arthik Awaj
By आर्थिक आवाज	 २०७६ फाल्गुन २४ गते शनिबार १४:०८ मा प्रकाशित
कार्यकारी निर्देशक, बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशन
पोखराको सिद्धार्थचोकमा रहेको बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशनले बिगत लामो समयदेखि शैक्षिक परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, युके र क्यानडालाई प्राथमिकतामा राख्दै परामर्श सेवा प्रदान गरिरहेको बेकन प्रिमियरका कार्यकारी निर्देशक रुद्रप्रसाद अर्यालसँग आर्थिक आवाजका लागि सन्देश श्रेष्ठले गरेको कुराकानीः
बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशन कस्तो खालको संस्था हो ?
बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशन विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई विशेष गरी वैदेशिक अध्ययनसँग सम्बन्धित परामर्श गर्न खोलिएको संस्था हो । हामी यस संस्थाबाट वैदेशिक शिक्षाका लागि गर्नुपर्ने तयारी, विद्यार्थी र अभिभावकहरुले विदेश जानुपूर्व गर्नुपर्ने तयारी, अपनाउनुपर्ने सतर्कतालगायतका बारेमा जानकारी गराउँछौं । विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई वैदेशिक शिक्षाको अवसर र चुनौतिबारे मसिनोगरी बुझाउँछौं । त्यसैले यो शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था हो । हामी नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएकाले यो विश्वसनीय संस्था हो ।
बेकनले विशेष गरेर कुनकुन देशलाई फोकस गरेर विद्यार्थी पठाउँछ ?
बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशनका खास विशेषताहरु केके हुन् ?
बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशन नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक शिक्षाका लागि परामर्श दिने र त्यसका लागि आवश्यक तयारीहरु आइएलटिएस लगायतका तयारीहरु गराउन आधिकारिक संस्था हो । न्यूजिल्याण्डको लागि हामी ट्रेण्ड एजेन्ट सर्टिफाइड काउन्सिलर हौं । न्यूजिल्याण्ड सरकारको आधिकारिक निकाय एजुकेशन न्यूजिल्याण्डबाट ‘एजुकेशन न्यूजिल्याण्ड रिकग्नाइज एजेन्सी’को रुपमा सर्टिफाइड भएको आधिकारिक संस्था बेकन हो । यसले विद्यार्थीलाई सही सूचना र मार्गनिर्देशन गर्ने, सही तरिका, सहि विधि र विद्यार्थीलाई एकदमै राम्रो भिसा लगाउन सफल संस्था हो भन्ने प्रमाणित भएपछि एजुकेशन न्यूजिल्याण्डले हामीलाई सर्टिफाइड गरेको छ । अष्ट्रेलियाका लागि पनि हामी सर्टिफाइड कन्सल्टेन्ट हौं । संस्था स्थापना भएदेखि नै हामीले विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलियाका लागि परामर्श सेवा तथा भिसा प्रक्रियामा सहयोग गर्दै आएका छौं । हाम्रोमा अनुभवी र दक्ष काउन्सिलरहरु हुनुहुन्छ । यूके र क्यानडाका लागि हामी सर्टिफाइड छौं । आइएलटिएस तयारी गर्ने विद्यार्थीहरुका लागि हामीसँग लाइब्रेरीको सुविधा छ । मक टेष्ट पनि गरिन्छ । विद्यार्थीलाई जतिसुकै बेला गाइडेन्स गरिन्छ भने आवश्यकता अनुसार निःशुल्क परामर्श तथा आवश्यक सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छौं । न्यूजिल्याण्ड, अष्ट्रेलिया लगायतका देशहरुमा श्रीमान, श्रीमती मध्ये कुनै एक ती देशमा जानुभयो भने पछि डिपेन्डेन्ट भिसामा आफ्नो लाइफ पार्टनरलाई लैजान सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशनले आफ्नै वकिलहरु राखेको छ । लाइसेन्स इमिग्रेसन एडभाइजर (वकिल) राखेर डिपेन्डेन्ट प्रोसेसमा जाने विद्यार्थीहरुलाई सहजीकरण गर्दै आइरहेका छौं ।
विद्यार्थीको विश्वास जित्न कत्तिको सफल भएको छ बेकन ?
विद्यार्थीले बेकन नै किन रोज्ने ?
बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशन एउटा उत्कृष्ट परामर्श दातृ संस्था हो । विद्यार्थी र अभिभावकको विश्वास जितेर उत्कृष्ट नतिजा दिदै आएको छ । यो नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत प्राप्त संस्था हो । न्यूजिल्याण्ड, क्यानडा, युके लगायतका देशका लागि हामी सर्टिफाइड छौं भने अष्ट्रेलियाको लागि आधिकारिक कन्सल्टेन्ट हौं । हामी पूर्ण रुपमा विद्यार्थीको भविष्यमा केन्द्रित रहेर सेवा दिन्छौं । नतिजा पनि उत्कृष्ट भएकाले अभिभावक र विद्यार्थीको विश्वास पनि जित्न सफल छौं । सोही कारण आगामी दिनमा पनि विद्यार्थीले बेकन रोज्नुहुनेमा हामी विश्वस्त छौं ।
बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशनमा विहान ७ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्मै कक्षा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई मेरो यहि आग्रह छ कि बजारमा धेरै शैक्षिक परामर्श दातृ संस्थाहरु छन् । तर वैदेशिक अध्ययन जस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिनुपूर्व परामर्शका लागि उत्कृष्ट संस्था रोज्न आवश्यक छ । जसले गर्दा विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित होस् । कहिंकतै अलपत्र पर्नु नपरोस् । बीचमै पढाई छाडेर फर्कनु नपरोस् । त्यसका लागि उत्कृष्ट शैक्षिक परामर्श दातृ संस्था चाहिन्छ र त्यो बेकन प्रिमियर इन्टरनेसनल एजुकेशन एउटा उत्कृष्ट गन्तव्य भएकाले यहाँहरुलाई एकपटक आइदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । यहिंबाट सेवा लिनुपर्छ भन्ने छैन तर कम्तिमा पनि एकपटक आएर बुझ्नुभयो भने विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई विदेश जान पक्कैपनि धेरै नै सहयोग पुग्छ ।